အရောင်းတွေပိုရအောင် နေ့စဉ်လုပ်နိုင်သော အရာများ - Sales Training Programs by Charisma
အရောင်းတွေပိုရအောင် နေ့စဉ်လုပ်နိုင်သော အရာများ
အရောင်းသမားတိုင်းကတော့ မိမိရဲ့ target တွေထိအောင်၊ အရောင်းတွေ ပိုပိုရအောင် ကြိုးစားကြမယ့် သူတွေချည်းပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ကြိုးစားသော်ငြား ထွက်လာတဲ့ ရလာဒ်က အဖြုအမည်း မသဲကွဲမှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်တဲ့အခါတွေလည်း ရှိတက်ကြတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာတဲ့အခါမှာ မိမိကိုယ်ကိုမေးဖို့လိုတဲ့မေးခွန်းက “ကိုယ့် target တွေ ထိဖို့၊ကျော်ဖို့ နေ့စဉ်ဘာလုပ်ရမလဲ” ဆိုတာပါ။ အာကာသထဲ ဒုံးကျည်လွှတ်သလောက် ရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်တွေကို နိစ္စဓူ၀ သတိထားလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရလာဒ်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်…။
အကောင်းမြင်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ အရောင်းသမားတွေသည် အကောင်းမမြင်တက်တဲ့ အရောင်းသမားထက် ပိုမိုသိသာစွာ အရောင်းတွေရလေ့ရှိတယ်။ အကောင်းမြင်တက်ဖို့ဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့လုပ်ဖို့ (အထူးသဖြင့် အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာ) ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အလုပ်ကိုချစ်ရင် ဒီကိစ္စက တဝက်ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းအင်ဆိုတာ ကူးစက်တက်တဲ့သဘောမှာရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဖောက်သည်တွေဖက်ကြည့်ရင်လည်း တက်တက်ကြွကြွနဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ အရောင်းသမားတွေနဲ့သာ အလုပ်တွဲလုပ်ချင်ကြပါတယ်။ ဖောက်သည်တွေမှ မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်သူမှ သုန်သုန်မှုန်သုန်မှုန်နဲ့ စိတ်မပါလက်မပါ လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေတဲ့သူတော့ အလုပ်လုပ်ချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။
စိတ်မပါတဲ့နေ့ဆိုတာ ရှိကြမှာပဲ။ စိတ်မပါလက်မပါဖြစ်တဲ့နေ့တွေမှာ မိမိကိုယ်ကို စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အရာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်။ သီချင်းနားထောင်ပြီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးအောင်လုပ်လို့ရသလို၊ မိမိသွားချင်တဲ့ ခရီးတစ်ခု (သို့) ဝယ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို commission ရရင် သွားလို့ရမယ်လို့ မျှော်မှန်းပြီး အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ လူတိုင်းဟာ လိုချင်တဲ့အရာတွေမတူလို့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတာ၊ ကိုယ့်ကို အားဖြစ်စေတာတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကူးတည့်သလိုတွေးယူနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြုံးပါ။ ဖောက်သည်တွေဆီ အီးမေးလ်မပို့ခင်၊ ဖုန်းမခေါ်ခင်၊ မီတင်းမဝင်ခင် ပြုံးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရလာဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ချေက ၂၀% မြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ အပြုံးတစ်ခုက တစ်ဖက်သားကိုလည်း အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖုန်းပြောတဲ့အခါ အသိသာဆုံးပါ၊ တစ်ဖက်ကပြောတဲ့သူ ပြုံးနေတယ်ဆိုတာ မမြင်ရလည်းပဲ ခံစားသိ,သိနိုင်သလို အပြုံးတွေဟာ ကူးစက်တက်တယ်။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အပြုံးနဲ့ ဖေးမတက်သူတစ်ဦးမှာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအပေါ် အမည်မသိအားတစ်ခုနဲ့ လွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ မယုံရင် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အရောင်းသမားတွေအတွက် အဓိက universal mission ကတော့ ဖောက်သည်အသစ်တွေရဖို့၊ ဖောက်သည်ဟောင်းတွေကိုလည်း ပျော်ရွှင်အောင်ထားဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့အရောင်းသမားတွေဟာ ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမသိ အလုပ်များနေတက်ကြပြီး အလုပ်ပြီးမြောက်လားဆိုတော့လည်း နိုးပါပဲ။ ဖုန်းပဲခေါ်ရမလို၊ follow up ပဲ လိုက်ရမလို၊ CRM ကိုပဲ update လုပ်ရမလိုလိုနဲ့ အချိန်တွေကုန်သွားတက်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်ကနေ ညနေအထိ အရေးမကြီးတာ၊ အရေးကြီးတာ ခွဲခြားထားပြီး checklist နဲ့ အလုပ်လုပ်ခြင်းဟာ အလုပ်ပိုမိုပြီးမြောက်ပြီး မြန်ဆန်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ် (ဤနည်းလမ်းကို အရောင်းသမားမဟုတ်တဲ့ သူများလည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်)
ဒါကတော့ အောင်မြင်တဲ့ Sales Trainer “Jeb Blount” က သူ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာပြောထားခြင်းပါ။ အရောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ ရုံးဆင်းလို့ အိမ်မပြန်ခင် ဖောက်သည်လောင်းအသစ်တစ်ယောက်ဆီကို နေ့တစ်နေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် ဖုန်းခေါ်ခိုင်းခြင်းပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ဘာမှခက်ခဲတဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စာရေးသူ ကျွန်တော်ကတော့ cold calling အရောင်းသမားတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်တွေ့မကျင့်သုံးဖြစ်ပေမယ့် ဖုန်းခေါ်ရတာအားသန်တဲ့ အရောင်းသမားများ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖန်တစ်ရာတေအောင် ကြားဖူးပြီးသား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ အရောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာ မကြားဖူးခဲ့ရင်တောင် ရုပ်ရှင်တွေမှာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ “ငါ့ နေရာက ဝင်ခံစားကြည့်ပေးပါလား” ဆိုတာလောက်ကတော့ ကြားဖူးမယ်ထင်တာပဲ။ မကြားဖူးသေးရင်လည်း ယခု လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ပြီး ကြားဖူးပြီးသားဆိုလည်း မမေ့အောင် ထပ်ပြောပါရစေ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းက ဖောက်သည်အတွက် တကယ်လိုအပ်ရဲ့လား? သူ့ အခက်အခဲက ဘာတွေလဲ? ကိုယ်သာ ဖောက်သည်နေရာမှာဆို ကိုယ့် ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လိုချင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပေးခြင်းအားဖြင့် ဖောက်သည်နဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဖက်တွေထက် နှာတစ်ဖျားသာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ခေတ်မှီတဲ့ အရောင်းသမားတော်တော်များများကတော့ ဒီအချက်ကို သဘောပေါက်နေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း တချို့တွေ ယခုထက်ထိ မကျင့်သုံးနိုင်သေးတာလည်း တွေ့ရပါမယ်။ သာမန်ရွက်ကြမ်းရေကျို အရောင်းသမားတစ်ယောက်နဲ့ စူပါဟီးရိုး အရောင်းသမားတစ်ယောက်ကို ခွဲခြားလိုက်တာ ဒီအချက်လေးတစ်ချက်ပါပဲ။